Umshini wokuhlanza okumanzi nokomile, Isiphephetha-moya - Jinqiu
Umshini Waphansi (2)
Umshini wokuhlanza (3)
Isihlungi Sekhaphethi (4)
I-Air Blower (5)
I-Systerm ehlanzekile yokugcinwa kwamatshe
Umenzeli Wokupholisha waseGrainte
Imabula wokucwebezelisa Crystallizer
Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle ngamakhasimende ethu ngekhwalithi ephezulu, amanani entengo yokuncintisana kanye nezitayela ezinhle kakhulu.
IShijiazhuang Jinqiu Trading Co., Ltd.kungumhlinzeki oqeqeshiwe womshini wokuhlanza, amathuluzi wokuhlanza kanye nohlelo lokugcinwa kwamatshe. Singahlinzeka nge-scrubber, burnisher, vacuum cleaner, carpet cleaner, blower, wringer trolley, izinqola, ukunakekelwa kwemabula negranite, ukupholisha, ukulungisa nokuhlanza imikhiqizo.
Amakhasimende amaningi aphakamisa izinhlelo ezintsha zokuhlanza imakethe yasendaweni emazweni ahlukene, kumakhasimende ahlukahlukene esinganikeza ngochungechunge lwezixazululo njengoba kudingeka. Kuze kube manje sithumela umshini wokuhlanza namathuluzi wokuhlanza eningizimu-mpumalanga ye-Asia nase-Europe ngaphezu kwe-10years.
Ukuhweba ngeShijiazhuang Jinqiu kuzoqhubeka nokuhlinzeka ophathina bethu ngobuchwepheshe obuphambili futhi kwanelise nemikhiqizo, ukwenza impilo yethu nokusebenza kube lula futhi kube lula.
Iloli engu-350L / 450L Nyakazisa –B-110A / B-110B
Imabula wokucwebezelisa Crystallizer-KLEEVER K2 / K3
MR5 Imabula Yokucwebezela I-Crystallizer
34L / 46L Side cindezela double wringer inqola - H0201 0202
Siyaqiniseka ukuthi sizokwabelana ngemiphumela efanayo futhi sakhe ubuhlobo obusebenzisanayo nabalingani bethu kule makethe.
China umphakeli izinga okusezingeni plastic esishelelayo
Izixazululo ze-granite ezinemibala ekhanyayo
I-granite enemibala ekhanyayo netshe lokugqwala konke kungama-granite wesakhiwo se-lamellar. Ngaphezu kokumunwa kwamanzi nge-capillary okuvamile kwe-granite, ngenxa yombala omhlophe okhanyayo, kuzoba khona indawo yamanzi noma ukungcoliswa komhlaba, futhi umkhondo wamanzi akulula ukunyamalala. Kwi...
Kungani ukhetha ukuxubha imishini
Njengoba phansi kwezitolo ezinkulu kanye neziteshi kungamathayili emabula noma obumba, izinhlobo ezinjalo zaphansi zinezidingo eziphakeme kakhulu zenhlanzeko, phela zimele isithombe sendawo yomphakathi. Ngakho-ke, umsebenzi wokuhlanza kufanele wenziwe ngokucophelela. Kancane kancane, ...
I-20'FCL NCL One Step Crystallizer neBellinwax ifike isitoko samakhasimende ngaphambi kweholide loMkhosi woMkhosi.
Ama-National Chemical Laboratories njengoba sazi i-NCL, kusukela ekuqaleni kwawo-1940 ngasekupheleni kwawo enza insipho kanye nama-shampoos ebhizinisi lobuhle be-salon, eya endimeni yobuholi namuhla embonini yezokugcinwa kwendle njengomhlinzeki ogcwele, onophawu lomhlaba wonke. I-NCL ...
Umkhiqizo ngamunye wenziwe ngokucophelela, uzokwenza waneliseke.
SC-1500 Isivinini seBurnisher
Floor Ukuvuselela Machine SC-004
Umshini Wokuvuselela I-BD2AE-Floor
Umshini Wokuvuselela I-BD1AE
Umshini wokuxubha we-BD3A Multi-function
Umshini wokuxubha we-Multi-function BD2A
Umshini wokuxubha we-Multi-function BD1A
Multi-ukusebenza phansi umshini-SC002